Banaanbax la’isku rasaaseeyay oo ka dhacay Muqdisho | raascasayrmedia.com
← Midowga Yurub oo ka codsatay DKMG inay hagaajiso nidaamka Cadaaladda
Meles Zanawi oo sheegay in DKMG uu gacan kasiinayo ciribtirka Shabaab →
April 15, 2011 · 7:33 pm
Banaanbax la’isku rasaaseeyay oo ka dhacay Muqdisho
Ciidamo ka tirsan dowladda KMG Soomaaliya ayaa maanta isku rasaaseeyey goob uu ka socday Banaanbax oo ku taaala degmada Boondheere ee gobolka Baanadir.
3-qof ayaa ku dhimatay oo mid ka mid ah uu yahay Askari ka tirsan Ciidamada dowladda KMG 5-kalana way ku dhaawcmeen iska horimaad maanta ciidamo kawada tirsan kuwa dowladda ku dhexmaray Nawaaxiga dal jirka Dahsoon degmad Boondheere ee gobolka Banaadir.
Iska horimaadka dhexmaray Ciidamada dowladda KMG ayaa yimid kadib markii Ciidamo ka tirsan dowladda ay is horistaag ku sameeyeen Banaanbax lagu taageerayay shirkii ka dhacay Magaalada Nairobi ee Xarunta dalka Kenya kaasi oo la sheegay in markii ciidanka dowladda ay is hortaag ku sameeyeen Ciidamo la socday Banaanbaxayaasha uu iska horimaadka dhexmaray iyadoo la tilmaamay in labo ka mid ah dadkii banaanbaxa dhigayay ay geeriyoodeen afar kalana ay dhaawcmeen.
Israsaaseynta kadib ayaa waxaa hakad galay banaanbaxii lagu taageerayay shirkii ka dhacay Magaalada Nairobi oo Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo Ciidamadii la socday banaanbaxayaasha ay is rasaaseyntu dhexmartay.
Xoghayaha Maamulka gobolka Banaadir ee dowladda KMG Soomaaliya C/kaafi Hillowle Cismaan oo la hadlay Maalin ka hor Idaacadda Shabelle ayaa waxaa uu sheegay in Maamulka gobolka Banaadir awaamiir ay kasoo saareen banaanbaxayaasha aan ka warqabin Maamulka gobolka oo ka dhacaya Magaalada Muqdisho.
Banaanbaxa maanta qasaarada ka dhashay ayaa wararku qaar waxaa ay sheegayaan in uu ku lug lahaa Max’ed Cumar Xabeeb Max’e Dheere inkastoo aan la xiriirnay Max’ed Dheere uu beeniyay in uu ku lug lahaa banaanbaxaasi qaban qaabadiisa hase ahaatee Max’ed Dheere oo waraysi siiyay Shabelle ka hor banaanbaxaani aya waxaa uu sheegay in go’aanka kasoo baxay Maamulka gobolka Banaadir uu ahaa mid lagu qoslo islamarkaan dadka ay dhigi karaan banaanbax ay ku muujinayaan shucuubtooda.